Daawo Sawirada’Muqdisho oo Maanta lagu soo Bandhigay Rag katirsan Al-Shabaab iyo Waxyaabaha Qarxa ee wateen | Salaan Media
Home Wararka Daawo Sawirada’Muqdisho oo Maanta lagu soo Bandhigay Rag katirsan Al-Shabaab iyo Waxyaabaha...
Daawo Sawirada’Muqdisho oo Maanta lagu soo Bandhigay Rag katirsan Al-Shabaab iyo Waxyaabaha Qarxa ee wateen
Waxaa Maanta Magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay rag la sheegay in katirsan yihiin Dagaalamayaasha Al-Shabaab oo gacanta lagu soo dhigay xili ay maleegayeen inay fal ka geystaan magaaladda Moqdisho.
Ragan Al-Shabaab katirsanaa oo gaaraya ilaa 4-Nin ayaa laga soo qabtay Degmada Wardhiigley ee Gobolka Banaadir xili ee falal lidi ku ah amaanka ku guda jireen ayna Wateen Bambaanooyinka gacanta laga tuuro iyo sidoo kale waxyaabaha qarxa .
Mid kamid ah Raga gacanta lagu soo dhigay oo lagu Magacaabo Maxamed Daahir Maxamuud ayaa sheegay in uu Al-Shabaab katirsanaa xiliga la qabanayayna uu bambo ku tuuray Rag katirsan Ciidanka Nabad Sugida balse la qabtay isaga oo baxsad ku jira.
Saraakiil katirsan Hay’ada Nabad Sugida oo ka hadlay goobta ragan lagu soo bandhigay ayaa waxa ee sheegeen in ragan ay Shabaab u qaabilsanaayeen aasida Miinooyinka iyo Weerarada Bambaanooyinka hasa ahatee nasiib wanaag Ciidanka Nabad Sugida gacanta kusoo dhigeen.
Soo qabashada Ragan Al-Shabaab katiranaa ayaa imaanaya xili amaanka Magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay uu sii xumaanayay eena ka dhacayeen Magaalada Falal Dilal iyo Qaraxyo isugu jira.